Sekureva kwe "Inotungamira Maonero Ekusimbisa iyo Kudzivirira uye Kudzora kweEcological Nharaunda Sosi ye" Mbiri Mbiri "Kuvaka Mapurojekiti" yakapihwa nebazi reEcology uye Kudzivirirwa Kwemagariro mazuva mashoma apfuura, iyo aluminium yekugadzirisa indasitiri haisisiri yechikamu che "Mbiri mbiri", asi electrolytic aluminium ichiri kunyorwa pakati pavo. Aluminium ine zvinyorwa zviviri: imwe i "green aluminium"; imwe yacho "maviri akakwirira uye imwe capital". Aya mavara maviri ane chaizvo zvakapesana nedudziro yealuminium. Saka, ndeipi iri dudziro chaiyo yealuminium?
"Makwiriro maviri nedhorobha rimwe" zvinoreva kushandiswa kwesimba kwakanyanya, kusvibiswa kwakanyanya uye zviwanikwa. Chirevo ichi chakatanga muna 2005, uye pakutanga chaive nechinangwa chekudzora kuburitswa kwemaindasitiri ane hukama nekusimudzira kukwidziridzwa kwemaindasitiri epamba. Kubva ipapo, mumagwaro emitemo akaburitswa nemadhipatimendi akakodzera, electrolytic aluminium yakaverengerwa se "mairi maviri akakwirira nedhorobha rimwe" maindasitiri. Gare gare, chirevo ichi chakashanduka kuva dudziro yezvigadzirwa zvemhando yepamusoro maindasitiri ealuminium.
Kana iri pfungwa ye "chinhu chimwe chete", zvinonyatso kuzivikanwa kuti aluminium ndiyo simbi ine yakanyanya kuchengetedzwa muvhu. Kunyangwe iyo matura ealuminium zviwanikwa munyika mangu ari mashoma, mukubatana kwezvepasi rose kwezvehupfumi, zviwanikwa hazvichadzoreredza kuvandudzwa kwenyika yangu indasitiri yealuminium. Huru bhodhoro. Zvinoenderana nehunyoro husina kukwana, nyika yangu ine gumi nemamiriyoni gumi ematani ematani ebhauxite mhiri kwemakungwa, uye huwandu hwezvigadzirwa zvemigodhi yemari yasvika matani emamirioni makumi mapfumbamwe pagore. Pakati pezvinotengeswa zvebhauxite gore rega rega, 50% inouya ichibva kumhiri kwemakungwa migodhi yemakambani eChina. Iko kugona kwekuvimbisa zviwanikwa kwakagadziridzwa zvakanyanya.
Kwete izvozvo chete, asi zvinonyanya kukosha, kukurumidza kusimukira kweindasitiri yenyika yangu yealuminium hakuiti chete kunotyisidzira zviwanikwa zvebauxite, asi zvakare inochengetedza zviwanikwa zvekusimudzira indasitiri yangu yechipiri yealuminium indasitiri. Mumakore achangopfuura, makumi emamirioni ematani ematani ekutanga aluminium munyika yangu akagadziridzwa kuita akasiyana aluminium zvigadzirwa gore rega. Kunze kwechikamu chidiki chekutengesa kunze, mazhinji acho mashandisirwo emumba. Izvi zvigadzirwa zvealuminium zvakanyatsosvika panguva yekubhadhara mushure memakore makumi maviri nemakumi matatu ekushandisa, izvo zvinogona kuvimbisa kugadzirwa kweiyo iripo uye yemberi yakashandiswazve indasitiri yealuminium. Kana pasina budiriro yemumba epuriyumu yealuminium indasitiri uye kuvandudzwa kwemusika wealuminium yekushandisa, iyo yechipiri aluminium indasitiri ichave isina chekubika, kana icharamba ichida kupinza "marara ekunze", ayo anozomanikidzwa nevamwe.
Izvo zvinogona kuoneka kuti kuyera kuvandudzwa kwenyika yangu indasitiri yealuminium kubva pakuona kwezviwanikwa kuchiri kuda maonero epasirese. Parizvino, nharo ye "imwe capital" iri chaizvo inopesana nekuvandudzwa kwazvino kwea aluminium indasitiri uye yakavhurika kubvunza.
Nezve iyo "mbiri yepamusoro" nharo, iyo aluminium indasitiri seinorema indasitiri haigone kurambwa zvachose, kunyanya seye electrolytic aluminium mune ine simba-inotakura indasitiri. Zvinogona kutaurwa kuti hapana aruminiyamu isina magetsi. Nekudaro, electrolytic aluminium ingori imwechete yekubatanidza mune yealuminium indasitiri cheni. Padivi rekushandisa, aruminiyamu zvinhu zvave sarudzo yekutanga yezvinhu zvekuchengetedza magetsi munzvimbo dzakasiyana nekuda kwehuremu hwadzo, kurwisa ngura, uye nyore kudzokorodza.
Mumakore achangopfuura, iine hunyanzvi uye kusimudzira kwenyika yangu electrolytic aluminium tekinoroji uye tekinoroji, magetsi-ekuchengetedza uye emission-kudzikisira zviratidzo zvekutanga aruminiyamu kugadzirwa haachisiri akafanana neanopfuura makore gumi apfuura. Muna 2020, magetsi anoshandiswa patani ye electrolytic aluminium munyika yangu ichave yakaderera se13,543 kWh, kuderera kweanosvika 8% kana ichienzaniswa ne2005. Iyo yekushandisa simba indekisi yave iri padanho repamusoro pasirese kwemakore mazhinji. Panyaya yekuburitsa girinihaiti, mu2019, iyo unit emissions yegreenhouse gasi inodyiwa nemagetsi mualuminium electrolysis maitiro munyika yangu anga ari 12.8, kuderera kwe24% zvichienzaniswa ne2006, uye mwero wekudzikira ndiwo uri kutungamira pasirese.
Panguva imwecheteyo, chiyero chekudzokesa zvinhu chealuminium chinogona kusvika kupfuura 95%, uye chinogona kudzokororwa kanoverengeka. Nekudaro, iyo yekushandisa simba uye girinihausi yegasi yekudzokororazve aruminiyamu kugadzirwa ingori ingangoita mashanu muzana yeiyo yepuru aruminiyamu. Naizvozvo, inozivikanwa zvakare se "simba rekuchengetedza zvigadzirwa" uye "" Energy Bank "mukurumbira.
Chiri kunyanya kutemesa musoro ndechekuti girinihausi yegasi muindasitiri yealuminium inonyanya kukonzereswa nesimba remafuta, uye simba remafuta ndiyo nzira huru yekugadzira magetsi yenyika yangu, inoverengera inopfuura 70% yenyika yakazara magetsi. Izvi zviri pachena mhedzisiro yekuvandudza kwemaindasitiri uye kugadzirisa masisitimu muindasitiri yemagetsi. Mubvunzo, nei uchirega indasitiri yealuminium ichiutarisira?
Neraki, pamwe nekufambira mberi kwesimba rekuchengetera magetsi, simba rinowedzerwazve senge hydrogen, zuva, mhepo, uye hydropower zvichashandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwemaindasitiri. Mazuva ano, simba renyukireya yenyika yangu rinotangwazve mushure memakore gumi ekumiswa. Mune ramangwana, mamwe mashoma-kabhoni magetsi sosi anowanikwa kuti ashandiswe.
Kunyangwe iyo simba rekushandisa indekisi ye electrolytic aluminium mudenga reiyo aluminium indasitiri isingakwanise kufuratirwa, chinhu chakakosha ndechekuti mukushandisa kunotevera uye kugadziriswa kwezvigadzirwa zvealuminium, inoratidza zvimwe zvemaindasitiri hunhu hwehunyanzvi hwepamusoro uye hwakanatswa kugadziriswa, kwete nezvimwe zvinhu chete. Basa rekutsiva, uye rakaratidza kunoshamisa kwesimba-rinoponesa mhedzisiro munzvimbo zhinji.
Kubva 2012, inotungamirwa neChina Nonferrous Metals Industry Association, chirongwa "Kusimbisa Green Aluminium Propaganda uye Kukurudzira Aluminium Consumption" chakatangwa zviri pamutemo uye chakaburitsa "green aluminium" chiziviso kunzanga yese. Mushure memakore mapfumbamwe ekubudirira, "green aluminium" yakafarirwa nevatengi. Aluminium zvinhu zvave izvo nyowani yekutyaira simba uye chikuru simba rekuchengetedza simba, kudzikisira kusvibiswa, shanduko uye kukwidziridzwa, uye yakaderera-kabhoni kusimudzira mukutakura, kuvaka uye mimwe minda.
Zvinoenderana nenhamba dzakatarwa, maererano nemotokari isingaremi, aluminium alloy inogona kushandiswa mumotokari inopfuura 500kg, iyo inogona kudzikisira huremu hwemotokari ne40%, uye yega yega 10% kudzikisa huremu hwemotokari inogona kuchengetedza nezve 3.5% ~ 6%, yega yega 1 litre yekushandisa mafuta inogona kudzikiswa, uye 2.33 kg yemweya wakasviba unodzikiswa. Izvo zvinogona kuoneka kuti aluminium alloy ine yakajeka mikana mukugadzirisa yakaderera kabhoni choutsi mumunda wekufambisa mota. Mumunda wekuvaka, iyo iriko stock yealuminium formwork munyika yangu yasvika mamirioni makumi masere emamirimita, ine mugove wemusika we30% mune yakakwira yepamusoro-yepamusoro uye yepamusoro-simudza yekugara musika. Iko kukurumidza kukura kwealuminium formwork inosangana nezvinodiwa zvegirini uye zvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza muindasitiri yekuvaka uye inochengetedza huni zhinji. Mumunda unopa imba, girini uye yakasvibira aluminium fenicha inoremekedzwa zvikuru nemusika. Mumunda weaerospace, ingave iri hombe nendege ndege kana yazvino kuvaka uye mashandiro enzvimbo yenyika yangu chiteshi, hapana chimwe chazvo chingaite pasina mupiro wealuminium. Aluminium alloy zvinhu zvakakoshawo mukusimudzira kukurumidza kukurumidza kwenzvimbo yangu yekumhanyisa njanji yekufambisa. Mune mimwe minda yekushandisa yakanyanya senge magetsi emagetsi uye kuvakwa kwemadhorobha, kwave nekukwira zvakare mukutsiva kwealuminium nemhangura, aluminium ine simbi, uye aluminium nehuni.
Chokwadi chinotaura zvinonzwika kupfuura mazwi. Inotungamirwa nekukurumidza kukura kwemusika unodiwa, nyika yangu yealuminium yakaburitswa yakawedzera kubva pamamiriyoni 7.81 emamiriyoni muna 2005 kusvika pamamiriyoni 37.08 emamiriyoni muna 2020. Kukura nekukurumidza uku kwakawanikwa pasi pemamiriro ehurumende macro-control uye kwakadzora kukura. Kana pasina kudiwa Neichi chakaoma rutsigiro, hazvigoneke kumhanya kwakadaro mhanyisa. Pasina kugadzikana kwekusimudzirwa kweiyo electrolytic aluminium indasitiri, zvingave zvakaoma kune mamwe masimi ekushandisa kuti ave nemitengo yakaderera-yakadaro, yakasimba-simba-inoponesa zvinhu.
Parizvino, nharo ye "maviri akakwirira uye imwe capital" yakanganisa zvakanyanya mukurumbira weiyo aluminium indasitiri. Izvo zvinotarisirwa kuti iyo nzanga yese ichave yakavakirwa mukutarisisa kweiyo yese aluminium indasitiri cheni uye nehupenyu hwese kutenderera, gadzirisa iyo-imwechete-mativi ekunzwisisa kwealuminium indasitiri, uye nekuziva iyo "green aluminium". Kwakanaka hunhu, kusimudzira kwemhando yepamusoro kuvandudza kwenyika yangu aluminium indasitiri.